Akụkọ - industrylọ ọrụ nkwukọrịta anya ga-abụ "onye lanarịrị" nke COVID-19?
Na Machị, 2020, LightCounting, otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ahịa kọntaktị nyocha, tụlere mmetụta nke coronavirus ọhụrụ (COVID-19) na ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọnwa atọ mbụ gachara.
Akụkụ nke mbụ nke afọ 2020 na-eru nso na njedebe ya, ụwa na-efekwa ọgbaghara COVID-19. Ọtụtụ mba agbanweela bọtịnụ ịkwụsị na akụnụba iji belata mgbasa nke ọrịa a. Ọ bụ ezie na ogo na ogologo oge nke ọrịa a na mmetụta ọ na-enwe na akụ na ụba ka bụ nke a na-ejighị n'aka, ọ ga-ewetara ụmụ mmadụ na akụnụba nnukwu mbibi.
N'iji ọnọdụ ọjọọ a, a na-akpọ telekomunikashọn na ebe data dị ka ọrụ ndị dị mkpa, na-enye ohere ka ọ rụọ ọrụ. Mana gafere nke ahụ, kedu ka anyị ga-esi atụ anya mmepe nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke telekomunikọnikọnụ / ngwa anya?
LightCounting adọtawo nkwubi okwu 4 dabere na nyocha na nsonaazụ nyocha nke ọnwa atọ gara aga:
China ji nwayọọ nwayọọ maliteghachi mmepụta;
Nlekọta nkewapụ mmekọrịta mmadụ na - eme ka bandwidth chọọ;
Mmefu ego nke ihe eji arụ ọrụ na-egosi ihe ịrịba ama siri ike;
Ahịa nke usoro akụrụngwa na ndị na-emepụta akụrụngwa ga-emetụta, ma ọ bụghị ọdachi.
LightCounting kwenyere na mmetụta ogologo oge nke COVID-19 ga-enyere aka na mmepe nke akụ na ụba dijitalụ, ya mere gbatịrị na ụlọ ọrụ nkwukọrịta anya.
Ọkachamara n'ihe gbasara ihe omimi bụ Stephen J. Gould nke “Ahịrị Ntinye Aka n’Aka” kwenyere na mmalite ndụ anaghị aga n’ibe nwayọ nwayọ ma na-agbanwe oge ọ bụla, mgbe a ga-enwe mgbanwe ngwangwa dị nkenke n’ihi oke ọgba aghara gburugburu ebe obibi. Otu echiche a metụtara ọha mmadụ na akụnụba. LightCounting kwenyere na ọrịa ọrịa 2020-2021 coronavirus nwere ike ịkwado mmepe mmepe nke usoro "akụnụba dijitalụ".
Dịka ọmụmaatụ, na United States, ọtụtụ iri puku ụmụ akwụkwọ na-agazi ụlọ akwụkwọ kọleji na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọtụtụ iri nde ndị ọrụ toro eto na ndị were ha n'ọrụ na-enweta ọrụ ụlọ na nke mbụ ya. Companlọ ọrụ dị iche iche nwere ike ịchọpụta na emetụtaghị arụpụtaghị ihe, na enwere uru ụfọdụ, dị ka mbelata ụgwọ ọrụ n'ọfịs na belata anwuru ikuku gas. Mgbe akpachara anya na-achịkwa coronavirus, ndị mmadụ ga-etinye nnukwu mkpa na ahụike mmekọrịta mmadụ na omume ọhụrụ dị ka ịzụ ahịa anaghị emetụ aka ga-aga n'ihu ogologo oge.
Nke a kwesiri ikwalite iji obere akpa dijitalụ, ịzụ ahịa ọnlaịnụ, nri na nnyefe nri, ma gbasaa echiche ndị a na mpaghara ọhụụ dịka ụlọ ahịa ọgwụ. N’otu aka ahụ, ndị mmadụ nwere ike ịnwa ọnwụnwa site na ụzọ ụgbọ njem ọdịnala ọdịnala, dị ka ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ oloko, bọs, na ụgbọ elu. Ndị ọzọ na-enyekwu mwepu na nchedo, dị ka ịnyịnya ígwè, obere ụgbọ ala robot, na ọfịs ndị dịpụrụ adịpụ, na ojiji na nnabata ha nwere ike ịdị elu karịa tupu nje ahụ agbasa.
Na mgbakwunye, mmetụta nke nje a ga-ekpughe ma gosipụta adịghị ike na ahaghị nhatanha ugbu a na ịnweta brọdband na ịnweta ọgwụ, nke ga-akwalite nnweta nnweta nke fixedntanetị na-adịghị agbanwe agbanwe na nke dara ogbenye na ime obodo, yana ojiji nke telemedicine.
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ ndị na-akwado mgbanwe dijitalụ, gụnyere Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, na Microsoft nọ n'ọnọdụ nke ọma iji nagide usoro a na-apụghị izere ezere ma ọ dị mkpụmkpụ na ekwentị, mbadamba, na laptọọpụ ahịa na ego mgbasa ozi n'ịntanetị n'ihi na ha nwere obere ụgwọ, Na ọtụtụ narị ijeri ego na-aga na aka. N'ụzọ dị iche, nnukwu ụlọ ahịa na usoro ahịa ndị ọzọ nwere ike ịdaba na ọrịa a.
N'ezie, n'oge a, ọnọdụ a ga - eme n'ọdịnihu bụ naanị ịkọ nkọ. Ọ na-ewere na anyị jisiri ike merie nnukwu nsogbu akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ọrịa a na-eweta n'ụzọ ụfọdụ, na-enweghị ịdaba na ndagide ụwa. Agbanyeghị, n'ozuzu, anyị kwesịrị inwe obi ụtọ ịnọ na ụlọ ọrụ a ka anyị na-agbafe oké ifufe a.